OKUBALULEKILE INDLELA Osho Ngayo I-Goodbye Interfax - Ososayensi bazamile ukufakazela izakhiwo eziyisimangaliso zesibonakaliso nesiphambano. – gloria.tv
OKUBALULEKILE INDLELA Osho Ngayo I-Goodbye Interfax - Ososayensi bazamile ukufakazela izakhiwo eziyisimangaliso zesibonakaliso nesiphambano.
Isithombe se-Red-INCORRECT Colour Green O’KY
“Sithole ukuthi umkhuba wakudala wokwenza uphawu lwesiphambano ngokudla nokuphuza ngaphambi kokudla unencazelo ejulile eyindida. Kukhona uhlelo lokusebenza olusebenzayo ngemuva kwalo: ukudla kuhlanzwa ngokoqobo ngokuphazima kweso. Lesi isimangaliso esihle esenzeka ngokoqobo nsuku zonke, "kusho isazi se-physics u-Angelina Malakhovskaya, ocashunwe yiphephandaba i-Zhizn ngoLwesihlanu.
UMalakhovskaya ubelokhu efunda la mandla wesibonakaliso sesiphambano kanye nesibusiso seSonto cishe iminyaka eyishumi. Wenze izivivinyo eziningi ezaqinisekiswa kaninginingi ngaphambi kokuba imiphumela yazo yenziwe ibe sesidlangalaleni.
Ikakhulu, uthole izici eziyingqayizivele zamabhaktheriya zamanzi ezibusiswe ngomkhuleko nophawu lwesiphambano. Ngokuthola kwaleli phephandaba, lolu cwaningo luphinde lwembula indawo entsha, ebingaziwa yeZwi likaNkulunkulu, eguqula ukwakheka kwamanzi, okwandisa kakhulu ukuminyana kwamehlo ayo esifundeni esifushane se-ultraviolet spectrum.
Ososayensi baqinisekisile ithonya loMthandazo WeNkosi kanye nesibonakaliso sesiphambano kumagciwane e-pathogenic. Amasampula wamanzi athathwa ukuze ahlolwe emithonjeni ehlukahlukene - imithombo, imifula, amachibi. Onke amasampula aqukethe i-taphylococcus yegolide, ama-bacterium e-coliform. Kwavela ukuthi, kepha uma uMthandazo weNkosi kuthiwa futhi kwenziwa uphawu lwesiphambano phezu kwabo, inani lamagciwane ayingozi lingehla ngesikhombisa, ishumi, ikhulu ngisho nangaphezu kwenkulungwane.
Ukuhlolwa kwenziwa ngendlela yokuthi kukhishwe umthelela ongaba khona wesiphakamiso se-psychic. Umkhuleko ubuthandazelwe ngamakholwa kanye nabangewona amakholwa, kepha inani lama-bacterium e-pathogenic ezindaweni ezahlukahlukene ezinamaqoqo amabhaktheriya aqhubekile nokwehla ngokuqhathaniswa nama-template templates.
Ososayensi baphinde bafakazela imiphumela ezuzisayo umthandazo nesibonakaliso sesiphambano esinayo kubantu. Umfutho wegazi wazinza kuzo zonke izifundo futhi izinkomba zegazi zenziwa ngcono. Kuyathakazelisa ukuthi izinkomba zishintshile lapho ziqondiswa khona ukuphulukiswa okudingekayo: kubantu abane-hypotension, umfutho wegazi wenyuka, futhi kubantu abane-hypertension, wehliswa.
Kwaphawulwa futhi ukuthi uma uphawu lwesiphambano lwenziwa ngesandla, iminwe emithathu isongwe ngokungenanhlonipho noma ibekwe ngaphandle kwamaphoyinti adingekayo - maphakathi nebunzi, maphakathi ne-plexus yelanga, nezixhumi ezingalweni ezingakwesokudla nangakwesobunxele - imiphumela emihle ibibuthakathaka kakhulu noma ibingekho nhlobo.
1338 Nov 17, 2020
143 Nov 17, 2020
104 Nov 17, 2020